Ofiif wal sakaallee Oromia Shall be Free |
bilisummaa March 10, 2014	Comments Off on Ofiif wal sakaallee
Jarri maal nu godhe.
Luka wal gaadinee
Jacha sirnaaf seeraa
Gaafatu wal kunne
Afaan wal micciirre
Quba walitti laannee.
Hamtuudhaan wal yaamuun
Maqqa walii faaluun.
Duratti wal hiinee
Jarri maal godha ree
Ifiif wal danqinee.
Raqarraa wal nyaannaa
Ifirraa doorginaa ?
Jarri maal haa godhu
Sareen yo wal aatu
Bineensaaf hin toltuu
Durattuu ni beekuu.
Raqaan nu cululee
Juneeydii mo kuma
Kan bifti saa namaa
Warra uumaan fardaa.
Eega addaan baase
Goomuu itti jaaree.
Somba keeysa buusun
Furgaasa nuu hidhuun
Warrii garaan yaadu
Kaan nyaatuuf jiraatu.
Hoggaa itti lixe
Akka waan qalamee
Olii gad utaaluun
Warra ija hiru
Dachiif samii laalu.
Warra jiruun du’ee
Achii gad fuudhanii
Foon saa jaji’anii
hundan gatan garuu
Doyna ni baraaru
Doyna siinqee diinaa
Diinni ni jaalataa
Miilaa saa gaadi’ee.
Sammuu saa lolla’a
Onnee saa ajjeesuun
Garaan waadaa galchuun
Dhagaa dhagaan cabsu
Garuu sana boda
Miilli diinaa isa
Isa dura deema
Deeraa namaa naqa
Isaatu nu dhaana
Eegee sa mirmirsee
Olii gad utaala
Hamaaf tolaa reeba
Afaan jaraa taha
Isaatu nuun falma
Nus bakka ni bu’a
Dubbii waliin xaxee
Wal afaan nu naqee
Yakkaan nu gaadi’ee
Jarri maal nu godhe
Ifiif wal gaadinee
Jiruun wal sakaallee.
Yaadannon Warra akka juneydii habiiba ka garaan yaadu ka nyaatuuf jiraatuuf
Previous Obboo Juneeddii Saaddoo gara uummata isaatti deebi’uuf fedhii fi carraa qabaa?
Next North Norway Oromo youths Demonstrate against the ongoing human rights violation By TPLF/EPRDF regime in Trondheim, Norway